Tyler က်အိမျမှပြန်လွတ်လာ, စမ်းနှင့်အတူပြုသောအမှု,en! - အတွက်အထောက်အပံ့ Kevin & Tyler
မတ်လ 22, 2017 တွင်အပ်ဒိတ်များ
Tyler စိတ်အားထက်သန်စွာဤနေ့ကိုစောင့်ဆိုင်းခဲ့ပြီးသူ၏အသက်တာနှင့်အတူပေါ်ရွေ့လျားစောင့်ရှောက်ဖို့စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်. သူကလူတွေကိုသူတို့ဖမ်းဆီးစဉ်ကတည်းကသူ့ကိုနဲ့ Kevin ပြသမျှသောထောက်ခံမှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်သည် — ဒါကြောင့်သူ့ကိုမှ wrote သောသူလူတိုင်းကသင့်ကိုကျေးဇူးတင်, တစ်ဦးလှူဒါန်းမှုလုပ်, သူတို့၏အမှုနှင့် ပတ်သက်. ပျံ့နှံ့အသိပညာပေး, နှင့်သွေးစည်းညီညွတ်မှုဖြင့်တစ်ဦးအချိန်သို့တစ်ဦး AETA အပေါ်စွဲချက်တင်လှည့်.
Tyler နှင့်အတူဤနေ့အခမ်းအနားကျင်းပ, နှင့်လည်းရန်အချိန်ယူ ဆဲထောင်ချခံရသူထောက်ခံမှုကလူ နှင့်အိတ်များနေဆဲနေသောတိရစ္ဆာန်များအဘို့အလုပ်လုပ်ဖို့.